Cabdi Qeybdiid “Kalfadhiga 6-aad yaan la xirin ilaa Dastuurka laga ansixiyo” – Kalfadhi
Guddiga dib-u-eegista dastuurka ee labada gole ee baarlamaanka dalka ayaa maanta horgeeyay fadhiga wadajirka ah ee baarlamaanka habraac ansixinta Qaraarka Dastuurka KMG oo ka kooban 11 qodob .
Guddoomiyaha guddiga xildhibaan Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid, ayaa sheegay in fadhiga baarlamaanka ee sanadkan aan la xirin ilaa Dastuur laga ansixiyo.
“Waxaan Baarlamaanka usoo jeedinayaa, shacabka Soomaaliyeedna oggeysiinayaa in kalfadhigan 6-aad aan la xirin ilaa shacabka Soomaaliyeed loo ansixiyo Dastuur sharciga waafaqsan. Haddii kale waxaa sanad kasta lagu jiri donaa Doorasho dadban, doorasho istaagan iyo doorasho jiifta”, sidaasi ayuu yiri guddoomiyaha.
Guddiga uu golaha shacabka BF u saaray sharciga doorashada ayaa la yimid model cusub oo doorasho iyaga oo meesha ka saaray hannaanka doorashada nidaamka matelaadda isu dheelitiran ee liiska xiran, taa badalkeeda keenay Nidaamka Aqlabiyadda ah (Majoritarian System) kuna salaysan in kursi kastaba gaarkiis loo doorto (Single Member popularity “SMP”) ama habka loo yaqaan horreeyaa guuleysta (First Past The Post “FPTP”) oo lagu kala baxo codka haldheeriga ah ee tartanka kursi deegaanka.